BaHuThuTaGabar - Page 341 of 380 - Welcome to Bahuthutagabar
လုပ်​ခထက်​ပိုတဲ့အသုံးစရိတ်​ကို သင်​သုံး​နေပြီးဒီထက်​များတဲ့ ဝင်​​ငွေ စုဖို့ဆိုတာမဖြစ်​နိူင်​ဘူး ဝင်​​ငွေနဲ့ထွက်​​ငွေ မညီမျှပဲအိမ်​မက်​​တွေ အကြီးကြီးမက်​​နေလို့လဲအလကားပဲ ။ ဝက်​သားစား ​စောတယ်​ဆိုတဲ့သာဓက​လေးကိုဖတ်​ဖူးကြမှာပါ။အတိုချုံ့ သူငယ်​ချင်းနှစ်​​ယောက်​ အလုပ်​အတူတူလုပ်​ကြရင်း တစ်​​ယောက်​က အိမ်​ပြန်​ရင်​ဝက်​သားထုပ်​​လေးလက်​မှာဆွဲလို့ပြန်​ပြန်​လာတတ်​​ပေမဲ့ ကျန်​တစ်​​ယောက်​က ဘာမှဝယ်​မလာဘူးတဲ့​လေ… ဒါကိုမြင်​တဲ့… သူ့သူငယ်​ချင်းက…. ​မေးတယ်​ ”မင်းကဘာလို့ဝက်​သားဝယ.်​ မစားတာလဲ ​နေ့တိုင်း ဘာအသားမှလဲမချက်​စားဘူးစားနိူင်​မှ လုပ်​နိူင်​မှာကွ” …..လို့​ပြောတာ့သူပြန်​​ပြောလိုက်​ […]
သင့်ကို စိတ်ညစ် စိတ်ပျော်စေတာ ” စိတ်”ပါပဲ
အရမ်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်း တွေကိုဖတ်စေချင်တယ် အရမ်းစိတ်ညစ်ပြီး ဘ၀ကိုအရှူံးပေးချင်နေပြီလား ။ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ ၊ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်နော် ။ ” လောက ” မှာ… ကိုယ့်ကို စိတ်ညစ် အောင်လုပ်တာလည်း ” ကိုယ်ပါပဲ ” ကိုယ် ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေး နိုင်တာလည်း […]
မင်းဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ.ဘယ်သူ့ကိုမှ.အသနားမခံပါနဲ့.ရုန်းထွက်နိုင်အောင်ပဲ..ကြိုးစားပါ မင်းခံစားနေရချိန်မှာ.ဘယ်သူ့ရှေ့မှာမှ.မျက်ရည်ခံမထိုးပါနဲ့.လူတွေမင်းကို ကြိတ်လှောင်ကြလိမ့်မယ် မင်း ကျရှုံးနေချိန်မှာ.ဘယ်သူကိုမှ ဒူးထောက်မပြပါနဲ့.မင်းကို သူတို့တွေ နင်းချေကြလိမ့်မယ် မင်းအောင်မြင်နေချိန်မှာ.ဘယ်သူ့ကိုမှ အပေါ်စီးက မဆက်ဆံပါနဲ့.သူတို့မင်းကို အထင်သေးသွားလိမ့်မယ် မင်းတက်လှမ်းနေတဲ့ လှေခါးထစ်တွေကိုတစ်ချို့က ထိန်းပေးကြလိမ့်မယ်။တစ်ချို့က ဆွဲချကြလိမ့်မယ်။တစ်ချို့တွေက တွန်းကန်ကြလိမ့်မယ် ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ်….တည့်မက်စွာ သတ္တိရှိရှိတက်နိုင်ဖို့ကမင်းတာဝန် မင်းကြိုးစားနေချိန်မှာ.တစ်ချို့က အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့.ကြည့်လိမ့်မယ်။တစ်ချို့က လှောင်ချင်သလို ခပ်ထေထေဆက်ဆံလိမ့်မယ် တစ်ချို့က […]
ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ.. အချို့သော အမျိုးသားတွေက ဒီပို့လေးကို မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ နံက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ “ မင်းနေကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ” စိုးရိမ်စကား ပြောပေးတတ်သူ။ နံနက်စာစားတဲ့အခါ “ ကော်ဖီ ၁-ခွက် ကို ၂-ယောက်တူတူသောက်ကြရအောင်ကွာ ” မျှဝေခံစားတတ်သူ။ နံနက်စာ ပြင်ဆင် (သို့ မဟုတ်) စားသောက်ပြီးတဲ့အခါပန်းကန်ခွက်ယောက်ကူသယ်/ကူသိမ်းပေးတတ်သူ။ ထမင်းစားတဲ့အခါ “လက်ရာကတော့ရှယ်ပဲ… ယောကျာ်း အကြိုက်သိ […]
တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အရာ(၅)ခု
တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အရာ(၅)ခု လူတိုင်းကတော့ ချမ်းသာချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့သူကတော့ လူနည်းစုသာ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်း မဆင်းရဲချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက သန်းနဲ့ချီရှိနေကြပါတယ်။ ဒါ့ဖြင့် လူတိုင်းနီးပါး ဘာလို့ဆင်းရဲနေတာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် လူတိုင်းနီးပါး ဘာလို့ မချမ်းသာတာလဲ … ?။ အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကတော့ […]
စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူတောင်းစား ဘဝမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သူ
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဟာ လမ်းဘေးမှာ ခဲတံလေးတွေ ရောင်းပြီး ငွေတောင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခွက်ထဲကို တစ်ဒေါ်လာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သုတ်သီးသုတ်ပျာနဲ့ ရထားပေါ်ကို ပြေးတက် သွားပါတယ်။ နောက်မှ သတိရပြီး ရထားပေါ်က ပြန်ဆင်းလာကာ စောစောက သူငွေထည့်ပေးခဲ့တဲ့ သူဆီ ပြန်သွားပြီး ခွက်ထဲက […]
မင်းတို့ကို ငါက ရွှံ့တုံး တစ်တုံးစီပေးမယ် မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲ “ဆရာကြီးကလည်းကွာ ပေးစရာရှားလို့” လို့ မတွေးနဲ့ မင်းတို့ကို ရွှံ့တုံးပညာ ပေးမလို့။ တစ်ယောက်က ဟာကွာ ရွှံ့တုံးကြီးဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုပြီး ဒီအတိုင်းထားမယ်။ ရွှံ့တုံးကို ဒီအတိုင်းထားတော့ ရွှံ့တုံးပဲပေါ့။ တစ်ယောက်က လောက်စာလုံးမယ် ရွှံ့တုံးထက်တော့ လောက်စာလုံးက ပိုတန်ဖိုးရှိမသွားဘူးလား။ ကောင်းပြီ […]
ဖခင် နှင့်တူသော ချစ်သူဆိုသည်မှာ…..
ဖခင် နှင့်တူသော ချစ်သူကို ရလျှင် ဘဝသည် ပြီးပြည့်စုံပါသည် 1-အ ကောင်းအဆိုးနှစ်တန် ဆုံးမပဲ့ပြင် ပေးခြင်း 2-တိုက်ခိုက်စော်ကားမှုများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း 3-လိုအပ်သည်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း 4-အနွံတာခံ ချစ်ခင် ယုယခြင်း 5-မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ကျသည့်မျက် ရည်ကို မဆို ခမ်းခြောက်စေခြင်း 6-ဘဝရည်မှန်းချက်ကို အထ မြောက်လာအောင် […]
စီးပွားရေး လုပ်ချင်သူများအတွက် အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်ကြည့်သွားစေချင်ပါတယ်…
ငွေလိုချင်ရုံနဲ့ တော့ စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့ ခဏနဲ့ ပြန်ပြုတ်သွားမယ် အလုပ်မလုပ်ရရင် မနေနိုင်တဲ့ ရောဂါရှိမှ စီးပွားရေးလုပ် ငွေက နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ် ငွေအရင်းအနှီး နည်းသွားလို့အလုပ် မဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး ဦးနှောက် ရင်းနှီးတာနည်းသွားလို့ အလုပ်မဖြစ်တာ သေချာ မစဉ်းစားဘဲငါးပွက်ရာပဲ ငါးစာလိုက်ချခဲ့လို့ အလုပ်မဖြစ်တာ မြန်မာလူမျိုးမို […]
တကယ်မှန်တယ်နော်…မယုံမရှိနဲ့ သင့်လက် ညှိုး နဲ့ လက်သူကြွယ် ဘယ်ဟာပိုရှည်သလဲ ?
လက် သူကြွယ် ပိုရှည်ရင် နံပါတ် ၁ လက် ညှိုး ပိုရှည်ရင် နံပါတ် ၂ အရှည် ညီတူရင် နံပါတ် ၃ နံပါတ် ၁ သမားသည် = ရုပ်လှပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် စိတ်ထက်ပြီး ရန်လိုသည် စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတတ်သှ် […]
« 1 … 340 341 342 … 380 »